Kitapo mangatsiaka mangatsiaka kokoa vita amin'ny tsipika vita amin'ny tondra-drano vita amin'ny tsimok'aretina China Kinghow
Na tena liana amin'ny dia an-dalambe / amoron-dranomasina ianao, fitsangantsanganana na fitsangatsanganana isan'andro, ity cooler kitapo ity no mpiara-miasa aminao indrindra amin'ny karazana hetsika ivelany. Mba hahazoana antoka fa mahatsapa fiononana faratampony ianao sy ny fahafaha-mitondra azy, ny kitapo mangatsiaka kokoa dia nandinika tsara ny tadin-tsoroka matevina sy ny vodin-kitapo misy kitapo. Fangaro mitambatra kitapom-batsy sy mangatsiatsiaka kokoa, afaho ny tananao rehefa feno miampy ny cooler kitapo mitafy voina mitazona ny lamosinao ho tsara sy milamina. Amin'ity cooler backpack ity dia afaka mandany ny andro mahafinaritra miaraka amin'ny fianakavianao ianao, mankafy ny fisotroana amoron-dranomasina na eny an-tsambo.
Backpack Cooler endri-javatra
COOLER SOFT DURABLE: vita amin'ny fitaovana TPU (Polyméthloplastic Polyurethane) maharitra sy maharitra. Ny TPU sariaka ara-tontolo iainana dia manana fihenjanana avo lenta, hery mahery fihenjana, fanoherana henjana sy fahanterana, fahaiza-manao fanoherana tonga lafatra ary fampisehoana tantera-drano matanjaka.
BACKPACK INDRINDRA NY LEAKPROOF: Ilay malefaka mangatsiaka kokoa kitapom-batsy dia misy zipper azo zahana ary ny famolavolana ny famehezana iray manontolo mba hahazoana antoka fa tsy mitete 100%. Ny fitaovam-pandrefesana avo lenta sy ny lamba fanamafisam-peo dia miara-miasa mba hitazomana ny sakafo mafana / mangatsiaka mandritra ny 3 andro (miaraka amin'ny refy 2: 1 azo refesina)!
COOLERS FAHASALAMANA LEHIBE: 13 ″ x 9.5 ″ x 22.5 ″ (L x W x H), lanja: 5,7 lb, afaka mitazona gilasy 30 farafahakeliny miaraka amin'ny ranomandry, manodidina ny 20L, manana toerana ampy ho an'ny zava-pisotro sy sakafo mandritra ny tontolo andro.
MULTIFUNCTION AND COMFORTABLE: efitrano fitehirizana 1 lehibe, Pocket 1 Zipper ambony, paosy harato 2 mitsangana hitazonana ireo entana maina sy mpamoha labiera 1 eo amin'ny tadiny. Ny fehin-kibo dia afaka mampahazo aina kokoa ny dianao. Ny fehy eo anoloana sy eo ambanin'ny kitapo mangatsiaka kokoa dia mety aminao ivelan'ny trano kojakoja fitsangantsanganana.
BPA MAIMAIMPOANA: ny valin'ny cooler an'ny kitapo vita amin'ny fitaovana tsara kalitao BPA maimaim-poana. Fitaovana mpiara-miasa tonga lafatra ho an'ny sakafo atoandro, tora-pasika filasiana Mitsangantsangana, zaridaina, fanaovana rambo, fitsangantsanganana, fampiasana lasy na any an-tokotany.
kitapo mangatsiatsiaka kokoa
Kitapo kitapo kitapo miloko maody